Puntland oo ciidamo u dirtay gobolada Sool iyo Sanaag - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo ciidamo u dirtay gobolada Sool iyo Sanaag
Puntland oo ciidamo u dirtay gobolada Sool iyo Sanaag
August 12, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Puntland oo ciidamo u dirtay gobolada Sool iyo Sanaag. [Sawirka: Archive]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa ciidamo badan u dirtay gobolada Sool iyo Sanaag isku day ah in looga hortago dadaalka ay Somaliland ku doonayso in sanduukhyada doorashada ay ku geyso Sool iyo Sanaag, sida ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror.
Tilaabadaan ayaa imaanaysa iyada oo Wasiirka Warfaafinta Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab sheegay in Somaliland ay cawaaqib xumo kala kulmi doonto haddii aysan joojin dhaqdhaqaaqeeda ku aadan gobolka.
Puntland iyo Somaliland ayaa ku dagaalamayay gobolada Sool iyo Sanaag muddo ka badan 20 sanno, taasoo labada maamul mid walba uu sheegto in dhulkooda ay kamidyihiin.
June 13, 2017 Ugu yaraan labo qof oo ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay wadada u dhaxaysa Garoowe iyo Boosaaso
September 15, 2017 Puntland oo sheegtay in deegaano kamid ah Puntland ay dhibbaato ka wadaan ururka Takfiirka
Puntland deploys troops to Sool and Sanaag
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddoomiyihii guddiga doorashooyinka Puntland Axmed Maxamed Cali oo loo yaqaan (Axmed Kismaayo) ayaa xilkiisii iska casilay maanta oo Isniin ah. Axmed Kismaayo ayaa sheegay in uu isku casilay arrimo isaga ugaar ah, sida [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Inta badan dadka kunool gobolada Puntland ayaa maanta oo Talaado ah ciiday kadib bishii barakaysnayd ee Ramadaan. Garoowe, madaxweyne ku xigeenka iyo masuuliyiinta dowladda ayaa saalada ciida ku oogay garoonka kubada cagta Mire [...]
Taliyaha haayada nabadsugida NISA ee DFS oo 1,500 oo ciidamo ah shaqada ka cayriyay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Taliyaha ciidamada nabadsugida dowlada federaalka Soomaaliya ee NISA ayaa maanta oo Axad ah shaqadii ka cayriyay 1,500 oo ciidamo ah, iyadoo isku shaandayn cusub lagu samaynayo haayada nabadsugida iyadoo ay kooxda Al-Shabaab weeraro [...]